हाईड्रोको आईपीओ नभरी नछोड्नुहोस्,३ करोड ६८ लाखको आईपीओमा धमाधम आवेदन ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > हाईड्रोको आईपीओ नभरी नछोड्नुहोस्,३ करोड ६८ लाखको आईपीओमा धमाधम आवेदन !
हाईड्रोको आईपीओ नभरी नछोड्नुहोस्,३ करोड ६८ लाखको आईपीओमा धमाधम आवेदन !
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) को बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा (रसुवा) का लागि एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा तीन लाख ६८ हजार १४३ कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेको हो ।
मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीले निष्काशन गरेको सेयरमध्ये एक लाख ८४ हजार ७२ कित्ता आयोजनाबाट अति प्रभावित हुने क्षेत्र तीन गाविस हाकु, डाँडागाउँ र राम्चे गाविसका लागि बासीन्दाका लागि र बाँकी रसुवा जिल्लाका अन्य गाविसका वासिन्दाहरुको लागि निष्काशन गरेको हो ।
रसुवाबासीले कम्पनीको आईपीओमा न्युनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार आठ सय ४० कित्तासम्मको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । जेठ १७ गतेदेखि खुल्ला भएको आइपीओमा ३१ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
आईपीओमा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका साथै जनता बैंक लिमिटेड धुन्चे, प्रभु बैंक स्याप्रुबेसी, आईसीएफसी फाईनान्स कालिकास्थान, हिमालयन बैंक बेत्रावति, र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी डाँडागाउँबाट समेत आवेदन फारम पाउन र बुझाउन सकिनेछ ।
स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गरेपछि कम्पनीले २० प्रतिशत सर्वसाधारणका सेयर जारी गर्ने बताएको छ ।
कम्पनीको जारी पूँजी ३६ करोड ८१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा ७० प्रतिशत सेयर संस्थापक समुहको, स्थानीय बासीन्दाका लागि १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । जसमध्ये २५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संस्थापक सेयरधनीबाट चुक्ता भईसकेको छ । ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको यो आयोजना रसुवा जिल्लाको डाँडागाउँमा रहेको छ ।
२०७४ जेष्ठ १९ गते १३:१७ मा प्रकाशित
शतप्रतिशत हकप्रदको यो अवसर नगुमाउनुहोला,पढ्नुहोस् कहाँ–कहाँबाट भर्ने ?